Nhau - Fi Europe 2019 - Chikafu Zvekushandisa uye Tekinoroji Exhibition
Global Ocean yakaenda kune Zvikafu Zvekudya Europe 2019 kubva Zvita 3-5, 2019 muParis, France.
Exhibition nguva: 3- 5 Zvita 2019
Nzvimbo yekuratidzira: Paris, France
Fi Europe, yakarongeka biennially nenyika inozivikanwa UBM International Media, inoitirwa muParis, France, mu2019.Ichi chiratidziro chiitiko chechokwadi chepasi rose muzvigadzirwa zvekudya uye indasitiri yehunyanzvi. Mumazuva matatu chete, iwe uchasangana nemikana mizhinji yebhizinesi kupfuura zvaunogona kufungidzira. Iwe uchave wakakomberedzwa nevechokwadi, anovimbwa uye ane hunyanzvi partner.Ivaka hukama hwakasimba hwebhizinesi uye usambofa wakarasikirwa nemukana wakanakisa wekutengesa kwepasirese.
Parizvino, chiratidziro ndicho muunganidzwa wakakura wepasirose wezvinhu zvekudya zvinopa vanotengesa, zvigadzirwa zvehunyanzvi kunze kwenyika, zvekudya zvinoshandiswa nevatengi utatu hunyanzvi hwekuratidzira, hwave munda wezvekudya musango wekuziva kwepamusoro musangano wepamusoro wezvekutengeserana. Mumakore apfuura, zvigadzirwa zvekuChinese zvekudya zvine yakave ichikosheswa zvishoma nezvishoma nemusika wepasi rose nekuda kweakasiyana siyana akapfuma, mhando yepamusoro uye yakaderera mutengo.Food ingredient emakambani mukuunzwa kwekunze kwazvino tekinoroji uye zvigadzirwa panguva imwe chete, zvakawedzerawo kuedza kwekutsvaga musika wepasi rose. veChinese emakambani anotora chikamu pakuratidzira pamusoro pemakore, chave chibvumirano chevakawanda vezvigadzirwa zvekudya mabhizinesi ekuwedzera musika wekunze nekuvandudza kukwikwidzana kwemusika wepasi rese kuburikidza neichi chiratidziro.
Nenharaunda yakazara ye80,000 mativi emamirimita, kuratidzwa kwa2017 kwakakwezva vanopfuura 1,800 varatidziri uye vanopfuura 26,000 vashanyi vehunyanzvi vanobva kunyika 119 nematunhu, 78% yavo vaive nekodzero dzekutenga uye 29% yavo vaive nebhajeti yemadhora anodarika mazana mashanu ezviuru.